चीनमा टिन एजमै सोल्टी र्मयो, एक्लै मितिनी सांघाई पार्कमा ! – Sagarmatha Online News Portal
चीनमा टिन एजमै सोल्टी र्मयो, एक्लै मितिनी सांघाई पार्कमा !
काठमाडौं । नेपालले चीन सरकारलाई उपहारस्वरूप दिएको ‘सोल्टी’ नामको एकसिंगे भाले गैंडा सांघाई पार्कमा मरेको छ ।
पेटको समस्याले गैंडा मरेको जानकारी चीनले नेपाललाई गराएको छ । त्यसको उमेर करिब चार वर्ष थियो । यो उमेर अर्धवयस्क (टिन एज) हो । एकसिंगे गैंडामा विद्यावारिधि शान्तराज ज्ञवालीका अनुसार गैंडा सामान्यतया २० वर्षसम्म बाँच्छ । एकसिंगे गैंडा नेपाल र भारतमा मात्र पाइन्छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले केही दिनअघि ‘सोल्टी’ मरेको पुष्टि गरे । ‘के कारणले मरेको हो, विस्तृत विवरण चीनबाट आइसकेको छैन,’ भट्टराईले बुधबार कान्तिपुरसित भने, ‘प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेपछि कारण थाहा हुनेछ ।’
सरकारले २०७५ भदौ पहिलो साता करिब साढे दुई वर्षको ‘सोल्टी’ सहित ‘मितिनी’ नामको पोथी गैंडा चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भाले मरेपछि सांघाई पार्कमा पोथी मितिनी एक्लिएको छ । ‘सोल्टी’ र ‘मितिनी’ लाई सांघाई पार्कमा राखिएको थियो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।